AF: Shirkadaha ku hagidda shaqada oo xad dhaaf ku sugan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto:Rebecca Nygren/Sveriges Radio
AF: Shirkadaha ku hagidda shaqada oo xad dhaaf ku sugan
La daabacay tisdag 3 september 2013 kl 12.14
Hoowlaha shirkadaha shaqa-hagidda ayaa ku sugan xaalad ey suuqa ku bateen, sida ay hayadda xafiiska shaqadu war-bixin cusub ugu gudbisay dawladda.
Shirkado gaarsiisan 3 500 ayaa tartan ugu jira sidii ey shaqa ugu hagi lahaayeen dadyoow gaarsiisan 3 000 oo shaqa-doon ah, sida uu sheegay ku-simaha agaasimaha hayadda xafiiska shaqada oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno AF Clas Olsson:
- Waxaan jeclaan lahayn inaan yareeyno shirkadahaa, si ey noogu sahlanaato howlaha kor-meerka ee shirkadaha. Haddii natiijo laga hadleyo, aanay macne ku fadhin hoowlaha la qabtey, hase yeeshee la kharash geliyaa oo keliya natiijada la gaaray.
Hayadda xafiiska shaqada ayaa adkeeyn doonta kor-meeradeeda iyada oo middaa la kaashan doonta hayado ey ka mid yihiin hayadda cashuuraha (Skatteverket) iyo hayadda kor-meerka iskuullada. Hayadda AF waxay sidoo kale ku talo-jirta sidii ey dib-raac ugu sameeyn lahayd qandaraasyada lala galo shirkadaha, isla-markaana u adkeeyn lahayd dibaba-galka iyo dhameey-tirka shirkadaha.